I-Really Nice Apartment kaLil BUB - EMPUMALANGA - I-Airbnb
I-Really Nice Apartment kaLil BUB - EMPUMALANGA
356 okushiwo abanye
Leli fulethi liyahlanzwa futhi libulawe amagciwane yiqembu lethu elicophelela ngendlela emangalisayo nelicophelelayo ngaphambi kokubhukha ngakunye futhi lilungele ukuhlala isikhathi eside.
Phakathi nebanga lokuhamba ngezinyawo ukusuka eDowntown, Bryan Park, kanye ne-B-Line Trail, leli fulethi likanokusho lingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuhlala edolobheni. Sekwenziwe ukulungiswa okuphelele okuhambisana ne-premium suite ehhotela le-boutique enobumfihlo obungeziwe, ubuhle, nezinsiza zendlu yangasese ngentengo ephansi kakhulu.
*Isaziso kubo bonke abazoba izihambeli mayelana ne-COVID-19: Ithimba lethu lokuhlanza belithatha izinyathelo ezinqala nokunakekela okwengeziwe ekubulaleni amagciwane kanye nasekuhlanzeni zonke izindawo ezisezindaweni zethu, okuhlanganisa zonke izibambo, izibambo, ompompi, nezindawo eziyisicaba. Bagqoke amagilavu futhi baqinisekisa ukuthi indawo ihlanzekile futhi iphephile kuwe nomndeni wakho.
Lesi isitatimende esinesibindi, kodwa kuyiqiniso: Ungacindezelwa kanzima ukuthola indawo engcono ongahlala kuyo ngezindleko eziphindwe kabili, noma yikuphi - vele ufunde izibuyekezo zethu.
Itholakala phakathi nebanga lokuhamba ngezinyawo eDowntown, Bryan Park, kanye ne-B-Line Trail leli fulethi likanokusho lingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuhlala edolobheni. Sekwenziwe ukulungiswa okuphelele okuhambisana ne-premium suite ehhotela le-boutique enobumfihlo obungeziwe, ubuhle, nezinsiza zendlu yangasese ngentengo ephansi kakhulu.
Imishini emisha yekhwalithi ephezulu, iphansi le-oki elimhlophe, izikhawu ze-quartz, ama-top-top finishes, itiye elimnandi, omatilasi abanethezeke ngokwedlulele, i-wifi, i-Netflix, i-HBO, i-Hulu, i-Hulu Live TV, iziphuzo zamahhala ezingu-$30 ku-Hopscotch Coffee kanye ne-Cardinal Spirits (ibanga lokuhamba ), kanye nesikhwama samahhala esingama-ounce angu-6 senhlanganisela yekhofi likabhontshisi ogunyaziwe esenzelwe thina. Hhayi lokho kuphela, kodwa u-10% wokubhukha kwakho uzuzisa izilwane ezifuywayo ezikhethekile ezingenakhaya.
Leli yifulethi lomndeni, elakhiwe ngokukhethekile futhi elakhelwe ukuhlinzeka abantu abavakashela idolobha lethu elihle ngendawo yokuhlala ekahle. Sizimisele ukwakha indawo ehlanzekile, esesitayeleni, yesimanje, futhi enethezekile ngokunaka kahle kakhulu imininingwane ehlanganisa amaphansi okhuni oluqinile olumhlophe lwe-oki, izindawo zokubala zequartz, izinto zikagesi eziwuhlobo olusha sha lonke, ama-dimmers akhanyayo kulo lonke, izitolo neziteshi zokushaja eduze kombhede ngamunye, I-Murphy Bed eyakhiwe ngokwezifiso eguqulela esofeni lesimanje laphakathi nekhulunyaka, indawo eyimfihlo ehlukile "I-Relaxation Loft" enombhede wosayizi wendlovukazi, ama-TV amabili esikrini esiyisicaba ane-Netflix, i-Hulu, nezinye izinsiza zokusakaza, kanye nobuciko bendawo obulenga ezindongeni. Siphinde futhi sinikeze izivakashi zethu uhlobo lwetiye olukhethekile, kanye nobhontshisi wekhofi kanye neziphuzo zekhofi ezimbili zamahhala ezivela kwa-Hopscotch Coffee, indawo yokosa yasendaweni etholakala endaweni yokuhamba ibanga lekhilomitha kuphela ukusuka efulethini, kanye namakhekhe amabili amahhala avela ku-Cardinal Spirits. , indawo yokudlela yasendaweni ezansi nomgwaqo osuka eHopscotch. Ikhishi selilungele ukusetshenziswa nalo, linakho konke okudingayo ukuze uziphekele ukudla kwakho, okuhlanganisa izitsha, okokusikisela, amabhodwe namapani, namafutha okupheka imbala. Siphinde sihlinzeke ngamathawula amasha nezindwangu zokugeza, ishampoo, i-conditioner, nensipho yomzimba.
Sinezindlu ezimbili ezihlangene ezitholakalayo ukuze ziqashwe. Lolu hlu olwe-East Apartment, ecishe ifane ne-West Apartment, ngaphandle kwasendaweni ye-Master Bedroom ine-"Relaxation Loft" ehluke kakhulu okuyigumbi eli-4' elide (kunjalo, liyi-4' kuphela ubude! ) enokhaphethi owubukhazikhazi. Inombhede wenkundla yosayizi wendlovukazi, ukukhanya kwemizwa, kanye ne-TV yesikrini esibanzi. Igumbi lifinyelelwa ngesitebhisi futhi lingavalwa ngomnyango we-accordion wangokwezifiso. Ilungele ukubuka amamuvi nomndeni, noma njengegumbi elipholile lezingane zokuhlanganyela nokuhlala kulo. Buka ikhanda lakho! Uma lolu hlu lubhukhwe ngezinsuku ozithandayo, sicela uhlole I-Really Nice Apartment -WEST ka-Lil BUB, eneGumbi Lokulala Elihle elinombhede olingana inkosi esikhundleni se-Relaxation Loft.
Ifulethi litholakala ngenhla kwe-Russian Recording, isitudiyo esisebenza ngokugcwele se-analog kanye ne-digital recording esikhiqize ama-albhamu angaphezu kuka-1000 kusukela ngo-2003. Amafulethi akhiwe ukuze abe umsindo ongasodwa esitudiyo ukuvimbela umsindo ukuthi ungophi emakamelweni. Uma ungathanda ukuvakashela isitudiyo, sicela usazise futhi singakujabulela ukukubonisa uma ingekho iseshini ebhukhiwe ngesikhathi uhlala.
Ungase uqaphele ukuthi obunye ubuciko ezindongeni buhlanganisa ikati elimangalisayo elimangalisayo. Ikati lethu lelo, igama lakhe ngu-Lil BUB (yingakho igama lefulethi), futhi ungomunye wamakati adume kakhulu (nathandwa kakhulu) emhlabeni. Ngaphezu kokuba umbhali oshicilelwe, umsingathi wohlelo lwezingxoxo, isihlabani se-TV nesamamuvi, kanye nomculi ohamba phambili eshadini le-Billboard, i-BUB iqoqe ngaphezu kwengxenye yesigidi samadola ngezilwane ezifuywayo ezingenakhaya emhlabeni wonke. U-10% wenani elibhukhiwe uzozuza I-Big FUND ka-Lil BUB ye-ASPCA, isikhwama sokuqala sikazwelonke sezilwane ezifuywayo ezinezidingo ezikhethekile. Uma ungathanda ukufunda okwengeziwe nge-BUB, ungafunda ngendaba yakhe emangalisayo nekhuthazayo ngokungena ku-Lil BUB futhi uvakashele ikhasi elithi Mayelana kuwebhusayithi yethu ( angikwazi ukuthumela izixhumanisi zangaphandle encazelweni!).
4.91 out of 5 stars from 356 reviews
4.91 · 356 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-356
Ifulethi litholakala ekugcineni eningizimu yeDowntown Bloomington. Isikwele esimaphakathi nedolobha siqhele ngebanga elingaphansi kwemayela, ukudubula okuqondile phansi kwe-Walnut St, umgwaqo esikuwo, nokuhamba imizuzu eyi-10 kuphela.
IBryan Park iyimizuzu emihlanu kuphela yokuhamba ngezinyawo ukuya empumalanga, futhi inezinkundla zokudlala eziningi zezingane, izinkundla zethenisi, umzila wokugijima, kanye nedamu lokubhukuda elimangalisayo elinamaslayidi amanzi.
Futhi sitholakala ibhulokhi elilodwa kuphela ukusuka kumzila we-B-Line, umzila omuhle wokuhamba/wokuhamba ngebhayisikili phambilini owawuwumzila wesitimela osuka amamayela angu-3.1 ukusuka ohlangothini oluseningizimu ye-Bloomington, udabule phakathi kwedolobha nangale kwalokho. I-Cardinal Spirits kanye neHopscotch Coffee zitholakala endleleni eya edolobheni, futhi zihamba imizuzu emi-5 kuphela ukusuka efulethini!
My name is Mike Bridavsky. I am a father of two, a recording engineer, and I have one of the most famous cats on the planet, Lil BUB. Our apartments are named after her. Hello.
Konke ukuxhumana kwefulethi kuphathwa ngqo ngumndeni wethu. Sicela ungangabazi ukuxhumana nathi uma udinga okuthile noma unemibuzo!